Ayaa looga aaraa ninkii eegayaa dilaye.by Ahmed jama | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Ayaa looga aaraa ninkii eegayaa dilaye.by Ahmed jama
Dakhliga kastamka dagmada borama oo hoos u dhac ku yimid 40% iyo shaqaalaha kastamka oo mudo lix bilod ka yar hantida qaranka ku dhistay guryo dhismo ah.
Malintii shalay ayay ahayd waxa uu ka ambabaxay kormeer wasarada maliyada ah oo yimiday kastamka boorama
Kadib markan ka helnay ila waredyo lagu kalsoon yahay oo shaqalaha kastamka dagmada boorama iyo
Cidanka ilaalada cashuuraha ee loyaqano (turuba taariyo) aya waxa ay noo xaqiijiyeen in kormeerka shalay ka ambabaxay xafiiska boorama ay ku yimaden hoos u dhaca dakhliga ku yimid iyo tuhunka laga qabo in hantida qaranka ay ku lunsadan shaqaaluhu.
Dakhli malmedka xafiiska dagmada boorama oo hore u aha wax fiksidh amaa in xadida oo ay xarayn jiren 24,000,000 ila 27000000 uu mar kaliya isku shareeray 43,000,000.
kadib marki ay miisanka dul fadhiisteen sarakiishii kormeerka ahaa misaankii jaadka iyada oo waliba aanay ku jirin waxyaabihi kale ee goobta lagu cashuri jiray sida qoryaha baxarasafka, sibidhka ,khudrada iyo daafiga. Waxa kale oo ay ilo wared yadayi noo xaqiijiyen in sababta ay hanti lunsigan ku timid ay tahay ay suurto galisay shaqalaha meesha ku qoran iyo maamulayasha iyo isuduwaha gobalkuba ay yihin beel kaliya oo makaahiil la yidhaahdo tafaasiisheeduna ay tahay mid ku cad hoos.
Mamulaha cashuraha beriga: makahil
Isuduwaha gobalka: makahil
Shaqalah ka hawl gala dagmada:
beelaha MAXAMED-CASE 5
Beelaha HABAR CAFAAN 6:
beelaha MAKAAHIIL: 68
Hantida qaranka ee la lunsado malin laha aya lagu qiyasaa 17,000,000
Waxa kale oo ay no shegen ilawaredyadu Ina ay cadalad daran iyo musuq masuqan aanay ka horaynin inta ay wasirada ka tahay Wasir samsam cabdi aden.
Waxa kale oo ay no cadeeyeen ila wareer yado in mamulaha kastamka boorama oo marki xilka la keenay aan wax hanti guri ah ku lahaan jirin magalada boorama oo daganan jiray Hotel boorama .hotelka layidha imikana uu galo guri bangalo ah oo ku yaala xaafada sheekh cismaan oo Isagu naf ahan u leyahay hada.
Isku soo wada duuboo hantidii umada oo aad moodo in la xalaaleystey in nin walba meesha uu joogo ay noqotey meherad uu isagu iska leeyahay sidaasi darteed waxaanse lagaraneyn wasiirada sam sam cabdi aaden oo ay mar walba gaadhayso hantida qaranka ee la lunsanaayo ee guryaha lagu dhisanaayo laguna maal galinaayo ololaha xisbiga WADANI.
hadaba su,aasha ?meesha talaa ayaa waxay tahay waa maxay sobobta ay wasiir sam sam talaabo uga qaadi laadahay ,ma waxaan odhan karnaa gabaygii ahaa sidan(Ayaa looga aaraa ninkii eegayaa dilaye.)